Inona no ary ahoana no fiasan'ny toby famokarana angovo hafanana? | Fanavaozana maintso
Portillo Alemanina | | Angovo geothermal, Angovo azo havaozina
Ny angovo geothermal dia karazana angovo azo havaozina izay afaka mampiasa ny hafanana avy amin'ny tany ambanin'ny tany mba hanafanana ireo trano ary hahazo rano mafana amin'ny fomba ekolojika kokoa. Iray amin'ireo loharanom-baovao azo havaozina tsy dia fantatra loatra izy io, fa tena miavaka ny valiny.
Io angovo io Tokony hamboarina amin'ny zavamaniry hafanana izy io, fa inona kosa ny zavamaniry hafanana ary ahoana ny fomba fiasan'izy io?
1 Fambolena herinaratra hafanana
2 Loharanon-karena angovo geothermal
3 Ahoana ny fiasan'ny toby famokarana herinaratra hafanana?
3.1 Sehatra geothermal
4 Karazan-javamaniry herinaratra hafanana
4.1 Zavamaniry etona maina
4.2 Zavamaniry misy tselatra
4.3 Ivontoeran'ny tsingerin'ny binary
Fambolena herinaratra hafanana
Ny toby famokarana herinaratra hafanana dia toerana iray ahazoana hafanana avy amin'ny Tany hiteraka angovo azo havaozina. Ny famoahana dioksidan'ny karbônika mankany amin'ny habakabaka hatramin'ny namoronana an'ity karazana angovo ity dia manodidina ny 45 g eo ho eo. izany latsaky ny 5% ny entam-barotra mifandraika amin'ny zavamaniry mandoro solika, ka azo heverina ho angovo madio.
Ny mpamokatra angovo geothermal lehibe indrindra eto an-tany dia Etazonia, Filipina ary Indonezia. Tokony horaisina fa ny angovo geothermal, na dia azo havaozina aza, dia angovo voafetra. Voafetra izy io, tsy satria ho reraka (lavitra azy) ny hafanan'ny Tany, fa azo esorina amin'ny fomba azo iainana any amin'ny faritra sasany amin'ny planeta izay misy ny hetsiky ny tany terestrialy mahery vaika kokoa. Izy io dia momba ireo "toerana mafana" izay angovo bebe kokoa azo alaina isaky ny faritra iray.
Satria ny fahalalana momba ny angovo geothermal dia tsy dia mandroso loatra, ny Geothermal Energy Association dia manombana fa hampiasaina fotsiny amin'izao fotoana izao dia 6,5% amin'ny tanjaky ny herin'izao tontolo izao.
Loharanon-karena angovo geothermal
Koa satria ny vovoky ny tany dia miasa ho toy ny sosona misisika, mba hahazoana angovo geothermal, ny tany dia tsy maintsy hotevena amin'ny fantsona, magma na rano. Io dia mamela ny famoahana ny atitany sy ny fisamborana azy amin'ny alàlan'ny toby famokarana angovo hafanana.
Famokarana herinaratra hafanana mila mari-pana ambony izany dia azo avy amin'ny faritra lalina indrindra amin'ny tany. Mba tsy hahafoana ny hafanana mandritra ny fitaterana ny zavamaniry dia tsy maintsy hatsangana ny fantsom-panafody magmatic, ny faritry ny loharano mafana, ny fivezivezena hydrothermal, ny fantsakana rano na ny fitambaran'izy rehetra.
Ny habetsaky ny loharano azo avy amin'ity karazana angovo ity mitombo miaraka amin'ny halalin'ny fandavahana azy sy ny akaiky ny sisin'ny takelaka. Amin'ireny toerana ireny dia lehibe kokoa ny hetsika geothermal, noho izany dia misy hafanana azo ampiasaina kokoa.
Ahoana ny fiasan'ny toby famokarana herinaratra hafanana?
Ny fiasan'ny toby famokarana herinaratra hafanana dia mifototra amin'ny fandidiana somary sarotra izay miasa ao rafitry ny tanimboly. Izany hoe, ny angovo dia alaina avy amin'ny atin'ny Tany ary entina mankany amin'ilay zavamaniry anaovana herinaratra.
Ny saha geothermal izay iasanao dia mifanitsy amin'ny velaran-tany miaraka amina gradiônera geothermal avo kokoa noho ny mahazatra. Izany hoe fiakarana maripana bebe kokoa amin'ny halaliny. Ity faritra misy gradient geothermal avo kokoa ity dia mazàna noho ny fisian'ny aquifer voafehina amin'ny rano mafana ary itehirizana sy voafetran'ny sosona tsy mety simba izay mitahiry ny hafanana sy ny tsindry rehetra. Izy io dia fantatra amin'ny anarana hoe reservoir geothermal ary avy eto no ahazoana izany hafanana hiteraka herinaratra izany.
Ny lavadrano fitrandrahana hafanana avy any ivelany izay mifamatotra amin'ny toby famokarana herinaratra dia hita ao amin'ireto saha mitrandraka hafanana ireto. Ny etona dia alaina amin'ny alàlan'ny tamba-jotra fantsona ary entina mankany amin'ilay zavamaniry aiza ny angovo hafanan'ny etona dia navadika ho angovo mekanika ary avy eo lasa angovo elektrika.
Ny fizotran'ny taranaka dia manomboka amin'ny fitrandrahana ny etona sy ny rano mifangaro avy amin'ny fitehirizan-tany. Rehefa entina any amin'ilay zavamaniry, ny etona dia misaraka amin'ny rano geothermal amin'ny fampiasana fitaovana antsoina hoe cyclonic separator. Rehefa esorina ny etona dia averina any ambony indray ny rano mankany amin'ny fitehirizam-bokatra mba hafanaina indray (loharano azo havaozina izy io).
Ny etona nalaina dia entina amin'ny zavamaniry ary mampihetsika turbine iray izay mihodina manodidina ny tokony ho izy ny rotor Revolisiona 3 isa-minitra, izay manetsika ny mpamorona indray mandeha, izay ivoahan'ny fikorontanana miaraka amin'ny sahan'electromagnetika ny angovo mekanika ho angovo elektrika. 13800 volts dia nivoaka avy amin'ny mpamokatra herinaratra izay rehefa nafindra tany amin'ireo mpanova, navadika ho 115000 volts izy ireo. Ity angovo ity dia ampidirina amin'ny alàlan'ny herinaratra avo lenta halefa any amin'ireo trano fitahirizana ary avy eo mankany amin'ny trano hafa, ozinina, sekoly ary hopitaly.
Ny etona geothermal dia averina miraikitra indray ary averina averina any ambanin'ny tany aorian'ny famadihana ny turbine. Io fomba io dia mahatonga ny rano haverina ao anaty fitahirizana geothermal ary mahatonga azy io ho fitrandrahana angovo azo havaozina, satria rehefa hafanaina dia hivadika etona ary hampiodina ny turbinina indray. Ho an'izany rehetra izany, azo lazaina fa angovo geothermal angovo madio, bisikileta, havaozina ary maharitra izy io, satria amin'ny famerenana indray ny lozisialy ivoahan'ny angovo dia voaangona indray. Raha tsy averina miditra ao amin'ny fitehirizan-drano ny rano misaraka sy ny etona mifangaro, dia tsy heverina ho angovo azo havaozina izy io, satria, rehefa lany ny loharanom-pahalalana, dia tsy misy etona azo alaina intsony.
Karazan-javamaniry herinaratra hafanana
Misy karazany telo ny karazana toby famokarana angovo hafanana.
Zavamaniry etona maina
Ireo takelaka ireo dia manana endrika endrika tsotra sy taloha kokoa. Ireo no mampiasa setroka mivantana amin'ny hafanan'ny sahabo ho 150 degre na mihoatra hitondra ny turbine ary hiteraka herinaratra.
Zavamaniry misy tselatra
Ireo zavamaniry ireo dia miasa amin'ny alàlan'ny fampiakarana rano mafana amin'ny alàlan'ny fantsakana avo lenta ary fampidirana azy ireo amin'ny tanky ambany. Rehefa ampidinina ny tsindry, ny etona amin'ny rano dia etona ary misaraka amin'ny ranoka handroaka ny turbine. Toy ny tamin'ny fotoana hafa, ny rano be loatra tafahoatra sy ny etona mifangaro dia averina any amin'ny fitehirizan-drano.
Ivontoeran'ny tsingerin'ny binary
Ireo no maoderina indrindra ary afaka miasa amin'ny mari-pana 57 degre fotsiny. Mafana kely fotsiny ny rano ary ampitaina miaraka amin'ny tsiranoka iray hafa izay manana teboka mangotraka ambany kokoa noho ny rano. Amin'izany fomba izany, rehefa mifandray amin'ny rano izy, na 57 degre aza ny maripana dia etona ary azo ampiasaina hanetsehana ireo turbine.
Amin'ity fampahalalana ity dia azo antoka fa tsy misy fisalasalana momba ny fiasan'ny toby famokarana angovo hafanana.
Ahoana ny fiasan'ny fanafanana hafanana? Lazainay aminao:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Inona no ary ahoana no fiasan'ny toby famokarana angovo hafanana?